हर स्वाद, चिकित्सा र कस्मेटिक मिड, विकसित शहरी आधारभूत संरचनाको लागि गर्म समुद्र, रेतीली समुद्र तटहरू - यो इजरायल वा टर्कीको महँगो रिसोर्ट्सको बारेमा होइन, तर अजोभ सागर (जिनिचेसक) को तटको बारेमा होइन। यी भागहरूमा बाँकी विभिन्न किसिमका साथ अचम्मलाग्दो हुनेछ।
Genichesk को बारेमा केहि शब्दहरू
एक सानो र आरामदायक रिजर्ट शहर खरसन क्षेत्र मा स्थित छ र यसको दक्षिणी, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु को लागि प्रसिद्ध छ, "बच्चाहरु" पैदल दूरी, माछा स्नान मा समुद्र तट।
जिन्निचेकमा त्यहाँ प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तुहरू छन्:
Spit Arabatskaya Strelka, जुन सागर अजव सम्म पुग्छ र जंगली समुद्र तटहरु र स्वत: शिविर प्रेमिका बीच लोकप्रिय छ;
खनिज पानीको हट स्प्रिंग्स;
लेक शिवश र अन्य साना estuaries को मिड;
पुरातत्व अरबी स्ट्रेल्का मा स्थित छ।
हामी निजी आवास रोज्छौं
निजी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई छुट्टिने घरहरूमा बसोबास गर्न को लागी, जो जिनेचेसक शहरमा आए। यी भागहरूमा समुद्रमा बाहिरिने लगभग सबैजना खर्च गर्न सक्दछ। सभापति मालिकहरू शहरको कुनै पनि भागमा उचित मूल्यको लागि कुनै पनि उचित मूल्यमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिन तयार छन्। त्यसोभए, परिवारका साना छोराछोरीहरू, "बालबालिकाको समुद्र तट" नजिकको आवास, लगभग शहरको केन्द्रमा स्थित छ। युवा आमाबाबु समुद्र तट को नजिकै समुद्र को गहराई देखि प्रसन्न हुनेछन्, जो 50 सेमी (एक घुटने वाला वयस्क) देखि अधिक नहीं हुन्छ, जो क्षितिज मा सैकड़ों मीटर को फैलन्छ। पुरा तरिकाले सुसज्जित शहरी समुद्र तट पूर्ण ढाँचा संग, आकर्षण र क्याफेहरू जियिचेसक आइपुगेका पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्नेछ। निजी क्षेत्रमा बाँकी, (सामान्यमा पर्यटकहरूको समीक्षा सकारात्मक छन्) जीवनको लागि एक सभ्य राशि बचत हुनेछ। केन्द्रीय क्षेत्रमा आवासको लागि मूल्यहरू जुन समुद्रमा हिँड्ने दूरी भित्र स्थित छ, प्रति दिन 60 रिव्निया प्रति व्यक्तिबाट खर्च हुनेछ। अपार्टमेन्ट छान्नु भएको बेला, तपाईंले समुद्रको सम्बन्धमा स्थानमा ध्यान दिनुपर्छ। Coastal Coastal Az Az, Primorsky, Kirov and Makharadze।
अजव सागरको किनारमा सक्रिय आराम
बच्चाहरु बिना मनोरञ्जन को connoisseurs को लागि, शोर कम्पनीहरु र जंगली समुद्र तटहरु, यो Arabatskaya Strelka को क्षेत्र मा निजी क्षेत्र को ध्यान को लायक को लायक छ। स्पिटलको किनारा नजिक समुद्रको गहिराई अत्यन्त गहिरो छ। यहाँ तपाईं दुवै को बोर्डिंग घरों र डेम्पिंग साइटहरु, साथ नै "जंगली" समुद्र तटों को सुसज्जित समुद्र तट, भेटिन्छ coves भेटिन्छ। यदि तपाइँ यस क्षेत्रमा बाँच्नको लागि एक कोठा रोज्नु हुन्छ भने, तपाईं जेनिचेसकमा सस्ती छुट्टीहरू पाउनुहुनेछ। पर्यटकहरूको समीक्षा सान्त्वनामा केही सीमितताहरूलाई संकेत गर्दछ, जसले मूल्यहरूको असरलाई असर गर्छ। अरबस्केया स्ट्रेल्कामा एक कोठा भाडामा 40 UAH प्रति व्यक्तिबाट भिन्न हुन्छ। बाक्लोमा सबै भन्दा लोकप्रिय स्थानहरू गेन्गोरका र Schastlivtsevo को गाँउ हुन्।
अजोभ सागरमा बाँकी उपयुक्त न केवल निजी क्षेत्र प्रेमीहरूको लागि उपयुक्त छ, तर छुट्टै निर्माताहरूको लागि जो स्वास्थ्य प्रक्रियाका साथ संयोजनमा सहज आवास मनपर्छ। यी उद्देश्यका लागि यो जिनिचेसको शहर भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको लागि सेनेटरीमेन्टमा रहन सिफारिस गरिएको छ। आराम र बोर्डिंग घर को आधारहरु लाई पर्यटकहरु को लागि एक विस्तृत श्रृंखला पनि प्रदान गर्दछ। तथापि, कसैले बुझ्नु पर्छ कि यस्तो प्रतिष्ठानहरुमा रहन को मूल्य निजी उद्यमीहरु को भन्दा धेरै अधिक हो। एक मानक डबल कोठा को लागत 200 UAH प्रति दिन देखि शुरू हुन्छ। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग र कोठा मा बाथरूम को उपस्थिति किराया को लागत 300-400 रिव्निया सम्म बढ्छ।
नारमन होटल परिसर
एक लोकप्रिय होटल को एक नारमन, जो सडक मा अजोव सागर को तट देखि 100 मीटर को दूरी मा स्थित छ। Makharadze, Genichesk। यहाँ आराम गर्नु सबैभन्दा आरामदायक र महंगी छ। होटल "मानक" र "जूनियर" कक्षा को अपार्टमेन्ट, प्रति दिन 300 रिव्निया बाट खर्च गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईं दिन मा तीन दिन को आदेश गर्न सक्छन् - 200 रिव्निया प्रति दिन प्रति व्यक्ति। यसबाहेक, नारमनले3र4व्यक्तिको लागि कोटेज किराया प्रदान गर्दछ, जुन प्रति दिन 400 रिव्नियाबाट खर्च हुनेछ। होटल को फाइदा समुद्र को निकटता, इंटरनेट को उपग्रह र उपग्रह टीवी, आफ्नो क्षेत्र, पार्किंग।
सडकमा। बालबालिकाका समुद्र तट र शहर बजारको छेउमा होटल ओर्किड होटल हो। होटल कोठाहरु को लागि मूल्यहरु प्रति दिन 450 UAH देखि शुरू हुन्छ। होटल परिसर को क्षेत्र मा एक स्विमिंग पूल, एक बच्चाहरु को खेल को मैदान, एक ब्राजियर र सौना छ। सबै कोठा एक ठूलो 3-मंजिलो भवनमा स्थित छ। होटल क्षेत्र बन्द छ र गार्डिएको छ, पार्किङ छ।
बोर्डिंग घर "कल्याण"
थप बजेटको आरामले सडकमा "कल्याण" बोर्डिङ घर प्रदान गर्दछ। अजव, प्रति व्यक्ति जीवित लागत प्रति दिन 50 UAH बाट सुरु हुन्छ। मनोरञ्जन केन्द्र को तत्काल अवरोध मा एक सुपरमार्केट र एक फार्मेसी छ। आत्म-पकाउने दुई सुसज्जित भान्साहरूमा प्रदान गरिएको छ।
मनोरञ्जन केन्द्र "मुस्कानको साथ घर"
सडक प्रिमोस्स्कयायामा एक "मुस्कानको साथ घर" हो - एक निजी मनोरञ्जन केन्द्र (जिनिचेसक)। यहाँ मूल्यहरू कम छैनन्, तर यो वैध छ। सबैभन्दा पहिले म एक सुविधाजनक स्थान हाइलाइट गर्न चाहन्छु। नजिकको एउटा सुपरमार्केट, एक बजार र समुद्री किनार हो। प्रत्येक कोठा मा छत को लागि अलग निकास छ। अपार्टमेन्टको लागत प्रति दिन 300 UAH बाट सुरु हुन्छ।
Arabatskaya Strelka मा तपाईं बोर्डिङ घर "ब्रिगेटिने" मा Schastlivtsevo (जेनिचेसका 17 किमी) मा गाँउ मा रहन सक्नुहुन्छ।7हेक्टेयर क्षेत्रमा पाँचवटा भवन र साना कटेजहरू सहज छन्। बोर्डिंग घर को सबै रेड इंडियन संग आफ्नो रेतीली समुद्र तट छ। कमरे को लागत प्रति दिन 180 UAH देखि शुरू हुन्छ।
मनोरञ्जन केन्द्र "Svitanok-2"
साथै Schastlivtsevo को गाँउ मा, तर Genichesk देखि 25 किमी, एक मनोरञ्जन केन्द्र "Svitanok-2" हो। एक दिन तीनवटा खाना कोठामा प्रति दिन 200 रिव्नियाबाट खर्च हुनेछ। बोर्डिङ घरको आफ्नै समुद्र तट, सिनेमा छ। आधारबाट3किलोमिटरमा एक चिसो तापक्रम हो।
हलिडे होटल कडोश
जिनेचेसक नजिकै गेंगकोका गाउँमा अरबी स्पिटको शुरुवातमा, एक निजी बोर्डिंग हाउस "कडीओश" हो, अर्को हाइड्रोथेरेपी "गोरियेश डेजेरोलो" हो। यहाँ तपाईं समुद्र द्वारा बाहिरी स्प्रिंग्समा शरीरको पुनर्स्थापनाको साथ आराम संयोजन गर्न सक्नुहुनेछ। बोर्डिंग घर मा भोजन संग आवास प्रति दिन 200 रिव्निया देखि खर्च हुनेछ।
यसकारण, जेनिचेसको शहर, जुन छुट्टीमा नचिनेको र नराम्रो एलोभ सागरको लागि प्रसिद्ध छ, पर्यटकहरूको लागि व्यापक अवसरहरू खोलिएको छ। यहाँ तपाइँ आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, आफैलाई स्फिशेस स्प्रिंग्स र मिडमा ताजा गर्नुहोस्। ती सबै भागहरूमा एक पटक, शहर पुनः होटल को निधि को कोठा बुक गर्न को लागी, फेरि मेलमिलापपूर्ण मेजबान को संपर्क राखन र संचारित गर्न, फेरि दोबारा आउछ।
ज्याक लन्डनको ताल कहाँ छ? फोटोको झील जैक लन्डनको
चीन, सूज़ौ: आकर्षण, फोटो
कसरी MinerGate पैसा फिर्ता गर्न? लाभ मा Minergate कसरी काम गर्न
पुरानो प्रतिक्रियाशील pancreatitis
रक्सी चेतना के हो
कसरी एक बच्चाको लागि बाइक चयन गर्न सिक्न
Flaxseed तेल - आवेदन र गुण
KVNschik Kolchin दिमित्री